eNasha.com - सहायक चालक व्यस्त हुँदा...
कहिलेकाहीँ प्लेन चढ्नेहरु यति अत्तालिनुपर्ने स्थिति आउँछ कि के भन्ने - यस्तै घटना हालै दर्ुबईमा घट्न पुग्यो । दर्ुबईको एयरपोर्टबाट भारतको पुणे उडिरहेको प्लेन आकाशमा नै उँधोमुन्टो लाएर र्झन थालेपछि नअत्तालिएर पनि के गर्नु !
कारण के परेछ भने, आरामले उडिरहेको प्लेनलाई सह-चालकलाई हर्ेर्दै गर्नु है भनेर मुख्य चालक केहीबेर शौचालय छिरेछन् । मुख्य चालक नभएको बेलामा उड्ने तयारीमा रहेको प्लेनको सिट मिलाउनु पर्‍यो भनेर सह-चालक सिट मिलाउन थाले । तर यसो गर्दा कुनै एउटा बटम थिचिन पुग्यो । जसले गर्दा प्लेन उड्न होइन पछाडि र्झन थाल्यो ।
अगाडि नहिँडी प्लेन पछाडि करिब २ हजार मिटर तलसम्म र्झन पुग्यो । भर्खरै प्लेन उडाउन सुरु गरेका सहचालकले जब प्लेन र्झन थालेको चाल पाए, ती २५ वर्षो चालकको सातो नै गयो । के भन्ने, कसलाई भन्ने - कसरी रोक्ने होला !
न त ककपिटको ढोका नै खुल्छ न त भित्रबाट कुनै आवाज नै आउँछ । यस्तो बेलामा बोइङ ७३७ मा रहेको आकस्मिक बटम र कोड थिचेपछि मात्र ककपिटको ढोका खुल्यो ।
आकस्मिक साइरन बज्न थालेपछि हतार हतार ३९ वर्षो ककपिटमा आइपुगे र सोधे, 'यो के गर्‍यौ तिमीले -'
प्लेन झन्नै उनार भएर तल मुन्टिएको ! यस्तो बेलामा प्लेनमा भएका यात्रुहरु चिच्याउन र रुन थाल्नु स्वाभाविक नै हो ।
पछि मुख्य चालकले अन्यलाई सम्झाउने प्रयास गरेका थिए । ती सहचालकलाई उपयुक्त कारवाही गर्ने तयारी भइरहेको भारतीय उड्डयन अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।